Gordes နှင့်ပန်းပဲဆိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြားပိုပြီးအဆင်ပြေရှိလိမ့်မည် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[16 / 09 / 2019] Haydarpasa မှာ 400 ။ တနင်္ဂနွေလှုပ်ရှားမှု	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[16 / 09 / 2019] Bursa အလုပ်အဖွဲ့နာရီအတွင်းကေဘယ်လ်ကား Changed	16 Bursa
[16 / 09 / 2019] Gaziray, 2020 လက်ဝဲနောက်ဆုံး	27 Gaziantep
[16 / 09 / 2019] စိတျထဲမှာ Corlu ရထားမတော်တဆ TCDD ကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာအမှိုက်ပုံးထဲကြောင်း	59 Corlu
[16 / 09 / 2019] Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ဆွဲဆောင်မှုများ MI လေလံဒီတစ်နှစ်တာ? .. စီမံကိန်းများကို MI ကြေညာလိုက်သည်? ..	34 အစ္စတန်ဘူလ်
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ45 Manisaသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအင်တာမီလန်ပန်းပဲဆိုင် Gordes နှင့်အတူယခုပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအင်တာမီလန်ပန်းပဲဆိုင် Gordes နှင့်အတူယခုပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်
30 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 45 Manisa, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
ငါပန်းပဲဆရာအကြားရောက်ရှိရှည် gordes ပိုမိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်
ရပ်ကွက်Bardakçi 8 1 လိုပဲ Gordes Demirci ၏မြို့ Manisa မြူနီစီပယ်ကသူတို့ရပ်ကွက်ကနေလမ်းမကြီးချကီလိုမီတာ။ အလွှာမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းစစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အရာကြောင့်ဒီလေ့လာမှုပိုမိုအဆင်ပြေများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေကတော့ရွာတွေကိုအားဖြင့်တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်စေသည်။
Manisa မြူနီစီပယ်ရဲ့ Forge ၏ Gordes ခရိုင်လိုပဲခရိုင်နှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းBardakçiပွဲတွေထဲမှာအကြားဆက်သွယ်ရေးခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ယာဉ်ကြောလုံခြုံမှုကိုအန်တရာယျလမ်းအပေါ်တစ်ဦးလက်ကိုသွင်း။ 8 1 ယူအစောပိုင်းကအခြေခံပစ္စည်းလမ်းဆင်းကီလိုမီတာ။ အလုပ်ကြမ်းပြင်မျက်နှာပြင် Manisa မြူနီစီပယ်ဖြည့်စွက်, အဲဒါကိုမြို့နှစ်မြို့အကြားပိုပြီးအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လေ့လာရေး Manisa မြူနီစီပယ်ရေးရာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Mustafa Mukhtar Gordes နေ့, Mukhtar Al-Fitr နှင့်Bardakçiလိုပဲရပ်ကွက်ရပ်ကွက် Mukhtar Azam အတူတကွသူကိုBardakçiသေချာခဲ့ပါတယ်။
သူကကျနော်တို့ဖျော်ဖြေန်ဆောင်မှုမှကျေနပ်နေကြသည် "likes နှင့်စမစ်နှင့် Gordes ရပ်ကွက်အတွင်း Mukhtar Al-Fitr အကြားဤနည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းရှိပါတယ်မျဉ်းသား။ ကျွန်မအထူးသဖြင့် Manisa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Cengiz Ergun အပါအဝင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူတတ်သောသူအပေါင်းတို့, ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်သကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အခြေခံအဆောက်အအုံအလုပ်ကိုလည်းစရဖတို့ကပြုလေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှားပါးမှုဖြေရှင်းဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Cengiz Ergun ကျေးဇူးတင်ပါတယ် "ဒါရိုက်တာထင်ပေါ်ကျော်ကြားBardakçi၏မြို့တော်ဝန်ဘေးကင်းနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေBardakçiဖြစ်လာတော်မူကြောင်းကိုညွှန်ပြပြုအလုပ်အတူလမ်း။ လမျးခရီးတွင်နှောင့်အယှက်ရှိကြ၏။ ဒါဟာဆောင်းကာလကိုနှင်းလျှောစီးအဖြစ်ကားများဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကအန္တရာယ်ပြုအလုပ်နှင့်အတူဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းလှပသောပဲ "ဟုသူကပြောသည်။
Bursa Beşevlerအခုဆိုရင်ပိုမိုအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ဗီဒီယို) 02 / 05 / 2016 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Bursa Beşevlerအခုဆိုရင်ပိုမိုအဆင်ပြေ: Bursa ၏ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကျန်းမာစေနိုင်ရန်အတွက်ပိုပြီးထေိုငျနှင့်ထိန်းသိမ်းထားအပေါ်အလုပ်၏အတိုင်းအတာ, Beşevlerနှင့်အတူ Ataevler မြေအောက်ရထားဘူတာရုံလှေကားကနေအတူတူနှစျသိမျ့Beşevlerသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြောင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ဓာတ်လှေကားသုံးစွဲဖို့စတင်ခဲ့သည်။ Bursa မြို့တော်ဝန် Recep Altepe သည်, မိမိပြန်လည်သုံးသပ်အတွက် BursaRay Besevler ဘူတာသူနိုင်ငံသားများကမ်းလှမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပြေစေပြီးအရာ, Beşevlerစက်လှေကားနှင့်ဓာတ်လှေကားကဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe, Bursa, မြို့၏ livable ကျန်းမာအရည်အသွေးကိုသူတို့ "မွို့၌ဖြေရှင်းချက်လိုအပ်သည်နှင့်အကျွန်ုပ်တို့၏လူတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြှင့်ဘို့ငါတို့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုပြသကြောင်းပြဿနာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်မှာတဦးတည်း" ဖြစ်ဖို့လမ်းအပေါ်လှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်လက်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
အဆိုပါဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖြတ်သန်းယခုအများကြီးပိုအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည် 03 / 03 / 2017 ဥရောပအာရှအဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသွားယခုအများကြီးပိုလွယ်သည်: အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်နှစ်ခုတိုက်ကြီးအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှသက်သာရာရစေရန်အတိုဆုံးလမ်းလည်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာ-based ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဒရိုင်ဘာများအတွက်ဘဝပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသေဆုံးသူယခု www.avrasyatuneli.co လိပ်စာကနေပေးဆောင်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့မဆိုအလိုအလျောက်ငွေပေးချေမှုစနစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အကူးအပြောင်းချိုးဖောက်မှုများအောင်မပါဝင်ပါလျှင်ယာဉ်မောင်း, HGS နှင့် ETC အကောင့်ချိန်ခွင်လျှာလုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူး, သင်အလွယ်တကူဖြတ်သန်းခပေးဆောင်နိုင်ပါ။ ဆင်းမိနစ်5ဖို့ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ဥရောပတိုက်ကြီးအောက်ဖြတ်သန်းပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုထပ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆက်သွယ်အာရှနှင့်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, Intercontinental ခရီးအချိန်။724 ရက်ပေါင်း ...
အခုတော့ Seka ပြည်နယ်ဆေးရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွန် Comfortable 12 / 02 / 2019 Izmit Seka ပြည်နယ်ဆေးရုံ, မွေးကင်းစကလေးကျောင်းပရဝုဏ်နှင့်ခရိုင် Polyclinic နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ပြည်နယ်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေအထားအတွက်အရေးအပါဆုံးစင်တာများတ Path ကို Walking ။ Seka ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးမွေးကင်းစကလေးကျောင်းပရဝုဏ်အလုပ်ပြီးနောက် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Akçarayသယ်ယူပို့ဆောင်ယခုအလွန်လွယ်ကူသည်။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်2။ အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကို၏နယ်ပယ်အတွင်းဇာတ်စင်Akçaray, Sekapark-Plajyolu အလုပ်အကြားလမ်းကြောင်းအပေါ်ပြီးစီးခဲ့ပြီ။ ပထမအဆင့်ကိုစတင်တံ့သောသိပ္ပံစင်တာ, Plajyolu 2.2 ကီလိုမီတာကနေချဲ့ထွင်ရှည်လျားသောလမ်းရထားလိုင်းကို extension ကို Izmit Seka ပြည်နယ်ဆေးရုံ-သိပ္ပံစင်တာတွင်ရပ်တန့်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ Akçarayလမ်းရထားလိုင်းကိုနှင့်အတူလူနာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေလျှော့ရန်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးစေခြင်းငှါ Izmit Seka ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးမှဘတ်စ်ကားဘူတာမှစတင်။ ဘာသာရပ်အပေါ်စကားပြော Izmit ...
ပါစိတ်ချရသောမှအခုဆိုရင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတ်ပုံတင်မည်အကြားတွင် Manisa အတွက် County 27 / 12 / 2018 Manisa မြူနီစီပယ်, Saruhanlıနှင့်Gölmarmara 15 သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်ဖို့ခရိုင်ကိုဆက်သွယ်သောကားလမ်းကိုဆင်းကီလိုမီတာစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအပြီးကျင်းပလိမ့်မည်သည့်ပူကတ္တရာလမ်း, မြို့နှစ်မြို့အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမရှိတော့ပိုလုံခြုံပြီးပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ Manisa မြူနီစီပယ်, Saruhanlıနှင့်Gölmarmaraဝန်ဆောင်မှုပေးခရိုင်ကြားရှိလမ်းလင့်များယူ၏မြူနီစီပယ်ဥာဏ်နှင့်တကွတန်ဖိုးရှိရှိနိုင်ငံသားများManisalıဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းအတွက်အစေခံရန်န်ထမ်း။ ပစ္စုပ္ပန်လမ်းအလုပ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ထို့နောက်ပူကတ္တရာအလုပ်ထုတ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြည့်တော့တာပဲ။ လေ့လာမှုရဲ့ပထမဦးဆုံးအဆင့်တွင်Saruhanlı Mukhtar ရေးရာဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူး Aybars Özbilgin "Filler အလုပ်အောက်ပါဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလေ့လာမှုများ ...
Alanya Sapadere သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသက်သာဖြစ် 26 / 06 / 2018 Alanya Sapadere ချိုင့်ရပ်ကွက်အတွင်းရဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့မှုကြောင့်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့အတွေ့အကြုံရှိလမ်းအသွားအလာများရှားပါးမှုအတွက် Demirtas ။ လမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံများကြောင့်ကတ္တရာပြီးနောက်။ ကျေးလက်ဒေသများရှိ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဖွဲ့များ, Alanya ၏ကွဲပြားခြားနားသောခရိုင်များတွင်လမ်းများဆောက်လုပ်ရေး, ချဲ့ထွင်မှု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်။223 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း Demirtas Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဖုံးအုပ်ပူကတ္တရာ၏ချိုင့်အတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းအုပ်စုတစ်စုကအသုံးပြုလမ်း, ယခုလည်းချိုင့်၌တည်ရှိသောကတ္တရာလမ်းကြောင်းကို Sapadere ရပ်ကွက်အတွင်းများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစတင်နေပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုလည်းချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် level အလုပ်ဆီသို့ဦးတည်ပါကမြေပြိုသည့်မိုးရေဖြတ်ကျုံ့, နံရံပေါ်မှာလေ့လာတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်စဉ် Sapadere3ကီလိုမီတာတာဝန်ထမ်းဆောင် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အ Savastepe ကိုယ်ပိုင်ဘူတာလမ်းမကြီးအခြေခံအဆောက်အအုံအလုပ်လုပ်ရင်းတိုးချဲ့မှု
@ 17 စက်တင်ဘာလ 10: 00 - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing အဆိုပါလိုင်းTekirdağ-Muratlıရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းအကျင့်ကိုကျင့်ကိုတွေ့
@ 17 စက်တင်ဘာလ 14: 00 - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance ဖျော်ဖြေ၏Biçerovဘူတာအဆောက်အအုံနှင့် Menemen ဘူတာအဆောက်အအုံမြေညီထပ်
@ 18 စက်တင်ဘာလ 10: 00 - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Kayaş Kayseri မီးရထားဂီယာလိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေး4ပမာဏစွမ်းအင်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူပျထှေးသောအကြားတွင်တွေ့ရှိ
@ 18 စက်တင်ဘာလ 10: 30 - 11: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: နွေဦးရာသီ Clamp တစ်ဦးက Business ဝယ်ယူ
@ 19 စက်တင်ဘာလ 10: 00 - 11: 00
Asap တင်ဒါမှ Midyat, Mardin, ပြိုကွဲအဝေးပြေးစီမံကိန်း
5 တထောင်၏တရုတ်-ဥရောပရထားနံပါတ်အကြားလေ့လာရေးခရီး xnumx'y ရောက်ရှိ
Haydarpasa မှာ 400 ။ တနင်္ဂနွေလှုပ်ရှားမှု
အဓိကရုဏ်း Interchange ယာဉ်အသွားအလာမှဖွင့်လှစ်
Sakarya MTB ဖလားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသတ်သွားပါပြီ
Başiskele superstructure Istiklal လမ်းအတွက်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်
Izmit နှင့်ရမ်း Zeytinburnu ရွာကွန်ကရစ်လမ်း
Bursa အလုပ်အဖွဲ့နာရီအတွင်းကေဘယ်လ်ကား Changed
Gaziray, 2020 လက်ဝဲနောက်ဆုံး
Marmaray, Volkswagen ကပြင်ဆင်
စိတျထဲမှာ Corlu ရထားမတော်တဆ TCDD ကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာအမှိုက်ပုံးထဲကြောင်း
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ဆွဲဆောင်မှုများ MI လေလံဒီတစ်နှစ်တာ? .. စီမံကိန်းများကို MI ကြေညာလိုက်သည်? ..
အလင်းရထားစနစ်ပြန်လာ Trabzon ရှုပ်ထွေးဆွေးနွေးချက်ကိုသင် Continues
ကြောင့် Haydarpasa ရထားဘူတာမြေမှရောင်း
Yedikuyu ထွက်သွားတဲ့နှင်းလျှောစီး Center က Path ကိုAsfaltlanıyဖြစ်ပါသည်
rayhab 16.09.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာဖြစ်ပါသည်
အဲဒီအစားညမှာ 95 1 တန်ချိန်မြေပေါ် Count
KARDEMİR, Ribbed coil ထုတ်လုပ်မှုစတင်
Izmir Mobility ကိုအပတ်ပွဲများစတင်
အဆိုပါ Soyer နင်းအမြင်အာရုံချို့ယွင်းပြည်သူ့ဥက္ကဋ္ဌ Translate
Sakarya အတွက်လွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထားနိုင်ငံများအသင်းဥယျာဉ်ထဲကနေ Yenicamii
အဆိုပါ Haydarpasa ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ 16 2006 ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားစက်ရုံ
Viaduct ဆောက်လုပ်ရေးမှာ Karakoyun Interchange စတင်
«	စက်တင်ဘာလ 2019 »
@ 16 စက်တင်ဘာလ 08: 00 - 17: 00
@ 16 စက်တင်ဘာလ 10: 00 - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Diyarbakir-Kurtalan လိုင်းလမ်းမကြီးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး
@ 20 စက်တင်ဘာလ 09: 30 - 10: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဏ္ဏဝါလမ်း Alsancak-HalkapınarMüsellesသောတောင်ပေါ်-သက်တမ်းတိုး
@ 20 စက်တင်ဘာလ 10: 00 - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Horizontal Lifeline ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
@ 24 စက်တင်ဘာလ 14: 00 - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဓာတ်လှေကား Electro-စက်မှုအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır
@ 25 စက်တင်ဘာလ 10: 00 - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Nazilli လူကူးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းစက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကားလုပ်ခြင်း
Malatya, သားမွေးလိုင်းစခန်းများအတွက်တင်ဒါ၏ရလဒ်အဖြစ်ပြုမိပတျဝနျးကငျြ Diyarbakir ခရီးစဉ်
အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating လေလံရလဒ်မှာတူရကီပြည်နယ်မီးရထားMıntıka၏6ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
ပိုမိုပေါ့ပါးUlukışlaလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating လေလံရလဒ်
Eryaman Hizmetev Landscaping တင်ဒါရလဒ် Making
တင်ဒါရလဒ်များ၏အလိုအလျှောက်အဆင့် Crossing တည်ထောင်နှင့်အတူကင်မရာစနစ်
Divrigi Kayseri ၏တိုးတက်မှုဟာတံတားအကြားစီးပွားရေးလေလံရလဒ်တွေ့ရှိရ
Malatya Kurtalan အတွက်တံတားနှင့် Culvert များအကြားကို Maintenance စာချုပ်များရလဒ်ဖျော်ဖြေ
ရထားလမ်းဂဟေဆော်ခြင်းစက် Butt ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်Alüminotermitတင်ဒါရလဒ် Making
Bursa Beşevlerအခုဆိုရင်ပိုမိုအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ဗီဒီယို)
အခုတော့ Seka ပြည်နယ်ဆေးရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွန် Comfortable
ပါစိတ်ချရသောမှအခုဆိုရင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတ်ပုံတင်မည်အကြားတွင် Manisa အတွက် County
Alanya Sapadere သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသက်သာဖြစ်
ပန်းပဲဆရာ Separation - ထိုပြည်နယ်လမ်းလေ့လာမှုများအဘို့အနိုင်ရနူးညံ့Düvertep Separation နှင့် UBM Inc ကမှန်းချက်ရဲ့ - Soma စီမံကိန်းစာချုပ်ဖက်စပ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
Kütahya - Simav - ပန်းပဲဆိုင်လမ်းဆုံလမ်းစာချုပ်ဖက်စပ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအနိုင်ရ
ပန်းပဲဆိုင် Tools များထဲမှာ Checked သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
နှင်းတိုက်ပွဲများအတွက် Gordes လမ်း
GRP နှင့်လှံတံနှင်းမှ Gordes နည်းလမ်းများ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (279) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
rayhab မော်ကွန်း (လစဉ်)
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro မြေပုံ 2019
Levent CARE ကဒီဇိုင်း | မူပိုင်ခွင့်© Rayhab များမှာ | 2011-2019